Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Dib Ugu soo Laabtay Magaalada Muqdisho (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Faderaalka ee Soomaaliya Mudane, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho, halkaasina ku soo gaba gabeeyey booqashadii rasmiga ahayd ee uu ku joogay dalka Masar labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Madaxweynaha iyo wafdigii la socday ayaa maanta duhurnimadii soo gaaray garoonka Aden Cade International ee magaalada Muqdisho, iyadoo halkaasi uu madaxweynaha Sharaxaad gaaban kaga bixiyay booqashadii uu ku tegay dalka Masar.
Madaxweyne Farmaajo oo ay weheliyaan Madaxweyinihii dowladdii kmg ahayd ee Soomaaliya Mudane, Cabdi Qaasim Salaad Xasan iyo Danjiraha Soomaaliya u fadhiyo dalka Masar Mudane Cabdi Qani Maxamed Wacays ayaa habeennimadii xalay la kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi Masar.
Khudbad uu goobta ka jeediyey Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu kaga hadlay caqabadaha hortaagan dowladnimada Soomaaliya iyo dadaallada xiriirka ahaa ay ku bixiyeen madaxdii ka horraysay sidii looga bixi lahaa bur burka ku dhacay qarannimada Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in caqabadaha kale ee wiiqay dowladnimada ay ka mid tahay qabyaaladda, musaq maasuqa iyo caddaalad darrada, kuwaasi oo dhammaantood sababay niyad jab ku dhaca dhallinyarada oo ku dhaliya inay ka tahriibaan dalka.
Madaxweyaha Jamhuuriyadda ayaa uga mahadnaqay dowladda iyo shacabka Masar sida diiran ee ay ugu marti galiyeen dalkaas isaga iyo wafdigiisa, waxa uuna sheegay in booqashooyinkan ay kuu muujinaayaan maqaamka iyo danaha Soomaaliyeed.